Muuri News Network » DEG DEG: Qarax Xoogan oo laga maqlay Gobolka Sh/Hoose & Warar…
DEG DEG: Qarax Xoogan oo laga maqlay Gobolka Sh/Hoose & Warar…
Cabaaro Sacado ka hor ayaa degmada Afgooye ee Gobolka Shabeelaha Hoose waxaa laga maqlay Qarax kaas oo sida la sheegay geystay khasaaro.
Qaraxaan ayaa la tilmaamay in uu yimid kadib markii guri ku yaalla Xaafadda iyo Aakhiro ee degmada Afgooye oo ay wada degenaayeen Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo dad shacab ah mar qura laga maqlay dhawaqa Qaraxani.
Mid ka mid ah dadka Jaalka la ahaa guriga uu qaraxu ka dhacay oo ugu warramay Shabakada muurinews ee Xafiiskeda Magaalada Muqdisho in uu sababay qaraxaasi khasaaraha 3 dhaawac ah kuwaas oo 2 ka mid ah uu liito dhaawacooda , loona soo qaaday Isbitaallada Magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale Maamulka degmada Afgooye oo aan faah faahin dheer ka bixinin qarxaasi ayaa tilmaamay in wax khasaaro ah uusan geysan , sidoo kale maamulka ayaa sheegay in Al Shabaab ay ku diyaarinayaan guriga uu falka ka dhacay.
Ma jiro ilo Madax banaan oo xaqiijinaya cidda ka dambeysa qaraxaasi walow maamulka degmada Afgooye uu ku eedeeyay Al Shabaab.